Calaamadaha kooxaha: sifooyinka calaamadaha ciyaaraha iyo tusaalooyinka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: Sports Inc
Isboortiga waa mid ka mid ah waaxaha sidoo kale lagu xiray naqshadeynta garaafyada. Nashqado iyo naqshadeeyayaal badan ayaa ku qasbanaaday inay doortaan naqshado ama dib-u-qaabayn ku habboon midabada iyo qiyamka naadi kasta. Marka aan naqshadeyno calaamad gaar ah, waxaan naqshadeyneynaa waxa noqon doona astaanta shirkaddaas ama, kiiskan, naadi ama koox isboorti.
Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee astaanta, qaar badan oo ka mid ah waxay ka tirsan yihiin kooxaha kubbadda cagta ama kubbadda koleyga, nooc kasta oo sport-ga laga hadlayo, waxay ka tageen taariikh taariikhi ah. Intaa waxaa dheer, Waxaan sidoo kale ku siin doonaa qaar ka mid ah tabo si aad u naqshadeyso summadaada ugu horreysa iyo tilmaamaha ama qodobbada ay tahay inaad ku xisaabtanto horumarkeeda.
U diyaargarow waayo-aragnimadan ciyaaraha ugu badan.
1 Astaamaha astaanta ciyaaraha
1.3 halhays ama fariin
2 Tusaalooyinka calaamadaha
3 Qalabka lagu naqshadeeyo astaantaada
3.4 Calaamada Craw
Astaamaha astaanta ciyaaraha
Si aad u ogaatid sida loo naqshadeeyo astaanta isboortiga, waxaa lagama maarmaan ah in aan ku tusino sifooyin taxane ah oo u adeegi doona aasaaska bilowga ah si loo bilaabo. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato oo u qaadato duntan yar oo tixraac u ah naqshadayntaada.
Markaynu aqoonsiga ka hadlayno, waxaynu ka hadlaynaa afartan su’aalood: waa maxay, sidee tahay, maxaa loogu talagalay iyo cidda loogu talagalay. Waxaa jira afar su'aalood oo aasaas u ah fahamka sababta aan u naqshadeyno astaanta. Haddii aan mid u naqshadeyno koox isboorti oo gaar ah, waa inaan ka fikirnaa sida aan rabno inay taageerayaashu noo arkaan, koox dhab ah oo xirfad leh ama naadi firfircoon oo leh dabeecad af-yaqaannimo gaar ah.
Waxaa laga yaabaa in habka abuurista calaamad, midabada loo isticmaali doono aan xisaabta lagu darin marka hore, maadaama shirkadu ay bedeli karto midabada wakhti kasta oo ay dib u habeyn ku sameyso, laakiin gaashaanka ama calaamadda midabada ayaa had iyo jeer ilaaliya. , waana mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamayo.
Qiimuhu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ku xisaabtanto, waa jawaabta su'aasha ah sida aad u rabto in taageerayaashaadu u arkaan kooxdaada oo ay u aqoonsadaan. Markaan ka hadlayno qiyamka, waxaan ka hadalnaa dhinacyo taxane ah oo aan la taaban karin oo na soo farageliya oo naga soo gudbiya kooxda ama kooxda. Tusaale ahaan, haddii aan eegno astaanta kooxda kubbadda cagta Paris (PSG), Waxay leedahay qiyamka halka fikrado badan sida xarrago, halis iyo awood dhaqaale loogu dhawaaqo.
halhays ama fariin
Tani waxay u ekaan kartaa olole xayaysiis ah, laakiin gaashaanka ama naqshadeynta sumadda waxaa loo baahan yahay inay lahaato calaamad yar, ha ahaato gudaha dhexdeeda ama sida qayb labaad oo gelin kasta. Halkudheggu waa astaanta kooxda iyo waxa ay taageerayaashaadu u aqoonsan doonaan kooxda waxa ay tahay.
Halkudheggu waa inuu noqdaa mid gaaban, kooban oo ku filan inaad u sheegto waxaad rabto inaad u sheegto oo ku samee saddex ama afar kelmadood ugu badnaan. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag, maadaama ay tahay tan ugu xusuusta badan.
Qaybtan qoraalka ah waxa aanu ku soo bandhigi doonaa tusaaleyaal kooxo kala duwan ah, kuwaas oo qaarkood dib u habayn lagu sameeyay si ay calaamaddu ugu haboonaato wakhti cayiman. Taasi waa, dib u cusboonaysii dhinacyo gaar ah ama faahfaahinta jaakada hubka oo u beddel walxaha hadda iyo kuwa casriga ah.
Liverpool waa koox kubbadda cagta ah oo ka tirsan horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska, Premier League. Waa koox leh in ka badan 30 sano oo taariikh ah, tan iyo markii loo caleemo saaray horyaalka Yurub ee Champions League lix jeer.
Astaanta inta badan waxaa lagu gartaa midabkeeda cas, midab aan kaliya siin shakhsiyadda gaashaanka balse sidoo kale calaamad u ah kooxda marka aad magacawdo Reds. Astaantu waxay muujinaysaa shimbirka loo yaqaan Shimbiraha Beerka, oo ah curiye xiddigeed oo qariya macnaha dhaqan-siyaasadeed. Waxa kale oo la socda hal-ku-dheg yar Weligaa ma socon doontid (kaligaa ma socon doontid), halku dhig ka soo baxaya isla taageerayaasha kooxdan oo soo dhaweynaya kooxdooda.
Ilaa XNUMX dib u habeyn ayaa lagu sameeyay gaashaankaani si loo helo midka hadda jira, lamana filayo tan iyo markii ay ka dhigeen mid ka mid ah kooxaha ugu muhiimsan taariikhda kubada cagta, gaar ahaan England.
Manchester City waa koox kale oo ka tirsan Premier League waana mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan Yurub. Waa kooxda ay xafiiltamaan kooxda caanka ah ee Manchester United, inkastoo ay wadaagaan ku dhawaad ​​isku magaalo, waxay sidoo kale u taagan yihiin naqshadahooda.
Naadigaan ayaa ku qasbanaaday inuu cusboonaysiiyo gaashaankiisa ilaa sideed jeer, 2016-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo. Si ka duwan Liverpool, Manchester City ayaa qaab ahaan u ilaalinaysa midabada buluuga ah. Summada hadda jirta waxa lagu gartaa inay ka kooban tahay gaashaan caadi ah 90-maadkii laakiin leh qaab hadda ka sii badan. Waxay ka kooban tahay waxyaabo muhiim u ah naadiga sida gooyaha dahabka ah iyo ubaxa cas ee caanka ah.
Magacaabista kooxda iyo astaanta, waxay adeegsadeen wejiga sans-serif oo bixiya muuqaal casri ah, nadiif ah oo ammaan ah oo sidoo kale siiya gaashaanka dhammaan shakhsiyadda. Marka la soo koobo, qaabkeeda cusub ee wareegtada ayaa noqday mid ka mid ah gaashaanka ugu caansan dhammaan horyaalada Yurub, labadaba England iyo wadamada kaleba.
Xigasho: Wallpaper Safari
Lakers waa koox kubbadda koleyga oo ka tirsan Ururka Kubadda Koleyga Mareykanka ee caanka ah (NBA). Waa koox ka socota Los Angeles ilaa maanta, waxay noqotay mid ka mid ah kooxaha kubbadda koleyga ugu fiican adduunka. Laguma yaqaan oo kaliya inuu yahay horyaal ilaa 16 jeer oo isku xigta, laakiin sidoo kale looma yaqaan naqshadeynta calaamadiisa.
Midabka shaki la'aan ayaa loogu dhawaaqaa isha qaawan, waa midabka caanka ah ee guduudan. Sidoo kale, waxa ay codsadeen astaan ​​ay ku midaysan yihiin dhammaan bahda kubadda kolayga Lakers. Astaantu waxay ka kooban tahay waxyaabo muhiim ah sida kubbadda koleyga oo xagga hore ah oo ay weheliso midab dahabi ah.
Qalabka lagu naqshadeeyo astaantaada
Haddii aan ku dooran lahayn qalabyo kale oo badan, tani waa shaki la'aan qalabka xiddigaha iyo midka lagu dhejiyay 10ka sare. Illustrator waa codsi ka tirsan Adobe kaas oo, awood u leh inuu la shaqeeyo vectors, wuxuu ogolaanayaa suurtagalnimada abuurista logos. .
Koontada oo leh qalab kaa caawin doona abuurista naqshadaada iyo sidoo kale waxaad leedahay profiles midab kala duwan si aad u habayn kartaa sida aad jeceshahay. Waa shaki la'aan wax kasta oo aad u baahan tahay inaad bilowdo.
Haddii aadan weli garaneyn meel aad ka bilowdo oo aad u baahan tahay barnaamij ku caawiya oo ku siiya kobcin, Canva waa aaladda ugu habboon. Barnaamijkani waxa uu leeyahay suurtogalnimada in uu yeesho habab la beddeli karo oo aad ka bilaabi karto naqshadaynta sida aad jeceshahay.
Waxa xun ee ku saabsan canva waa in ay yihiin templates oo qof kastaa isticmaali karo iyo Nashqadaada waxaa laga yaabaa in lagu celiyo magacyadii hore ee hore loo qorsheeyay, sidaas darteed raadku waa lumay. Laakiin shaki la'aan, waa ikhtiyaar wanaagsan haddii waxa aad rabto ay tahay qalab bilaash ah oo kaa caawin doona bilowgaaga.
Adobe Spark waa qalab kale oo ka mid ah Adobe. Waxaa laga yaabaa in jaleecada hore ay u muuqato mid aan macquul aheyn in lagu naqshadeeyo sumadda halkan, gaar ahaan haddii aad horey u tahay naqshadeeye oo aad la shaqeyso kaliya barnaamijyada sida Illustrator. Laakin Spark, waxaa suurtagal ah in si deg deg ah loo sameeyo garaafyo, sidoo kale waxaad haysataa fursad ballaaran oo lagu wadaagi karo shabakadaha bulshada.
Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo waliba waxay leedahay sawirro, xarfo iyo midabyo si aad u bilowdo samaynta naqshadahaaga ugu horreeya. Shaki la'aan waa qalab, sida Canva, oo sidoo kale kaa caawin doona tallaabooyinkaaga ugu horreeya.
Brand Crowd waa qalab u shaqeeya sidii tifaftire online ah. Ma aha oo kaliya mid aad u fudud in la isticmaalo, laakiin sidoo kale waxay leedahay noocyo badan oo calaamado bilaash ah oo horay loo qorsheeyay oo leh saldhig hore iyo kuwa kale oo u baahan kharash laakiin aad u xirfad badan.
Waa tafatire, taasoo ku xidhan waxaad door bidayso, Waxay leedahay kharash bishii bishii laakiin waxaad heli doontaa inaad awood u yeelatid inaad soo dejiso astaantaada qaab kasta, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad la shaqeyso vectors, sida adigoo la shaqeynaya Illustrator.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah tifaftirayaasha ugu fiican.
Naqshadeynta astaanta ciyaaraha waxay u baahan tahay weji cilmi-baaris oo horudhac ah iyo maskax-dhisidda si aad u siiso qaabka aad rabto inaad siiso kaliya. Taasi waa sababta calaamad kasta oo isboorti ama gaashaan ay u leedahay qaab iyo astaamo gaar ah.
Waxaan rajaynaynaa in aad ku dhiiradaan tusaalayaal aan ku tusnay iyo in agabkii aanu idinla wadaagnay ay kuu fududeeyaan habka aad u shaqayso. Kaliya midabka kooxdaada oo ka dhig mid la xasuusan karo intii suurtagal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » calaamadaha kooxda
Sida loo sameeyo buug yar